Igwe eletrik - Ikkaro
Ọ bụ ngwaọrụ na-agbanwe agbanwe nke na-agbanwe eletrik en n'ibu ike.
N'ebe a, anyị ga-ahụ otu ha si arụ ọrụ na otu esi ewu ha, site na injin dị mfe ruo na nke dị mgbagwoju anya
Usoro iwu nke igwe eletriki na ndi na eweputa oku
Mgbe ikpeazụ isiokwu na-ewu nke a otu-adọ nwetụ ugbu a moto, M hụrụ ya nnọọ akpali kpọgidere ... Nọgidenụ na-agụ ihe
Rụọ moto AC
Achọtala m ebe nrụọrụ weebụ ebe ha na-egosi esi wuo otu uzo otu ac ac. O yiri ka ọ dị mkpa iji mesie ya ike na ọ na-arụ ọrụ na otu usoro.
The engine ka na ihe mfe ịchọta na-emepe emepe na moto malite na usoro iwu ntọala nke ọkụ eletrik na nke igwe eletriki.
Echetara m mgbe m bidoro mahadum amụ igwe eletriki, ha malitere ikuziri anyi a ezigbo otu uzo moto. Site na ebe a gawa, ha mepụtara ya karia oge ha nwetara ụdị injin dị iche iche, mana ọ na-agbadokwa otu ụkpụrụ ahụ.
Ewu nke a mfe homopolar moto
N'ebe a, anyị na-ahụ otu esi ewulite moto usoro efu, yana naanị batrị, mpempe waya na magnet. Ihe… Nọgidenụ na-agụ ihe